အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း - အနုပညာ Louvre ကုန်စည်ပြပွဲပဲရစ်နှင့် Las Vegas မှာ Fine Arts ၏ပြတိုက်အတွက်အကျင့်နှင့်တစ်ဦးကပန်းချီဆရာ
မာရီယာ-မာဂရီးဃ Ivanova-Getova ၏မေးမြန်းချက်
မာရီယာ-မာဂရီးအဆိုပါအနုပညာ Louvre ကုန်စည်ပြပွဲ 2016 အတွက်ပန်းချီပြနဲ့ Las Vegas မှာဒဏ်ငွေဝိဇ္ဇာ၏ပြတိုက်အတွက်အမြဲတမ်း Exposition ပါဝင်မှုရှိခြင်းတစ်ခုတည်းသောဘူဂေးရီးယားအနုပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျပန်းချီ start ခဲ့ဘူးသည့်အခါမာရီယာ-မာဂရီး, ငါ့ကိုပြောပြပါ? ပန်းချီအလွန်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ငါ့အသက်ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အစဉ်အဆက်သူငယ်တန်းကတည်းကငါပုံတူမှငါ့ဆရာနှင့်ဝန်ထမ်းများကြိုးစားခဲ့ကြနှင့်ဤကြိုးစားမှုပြီးနောက်သူတို့သည်ငါ၏အကျင့်ကိုကျင့်၏ပြပွဲသတ်မှတ်ထားပေသည်။ "သင်ကြီးပြင်းလာသောအခါအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်မယ့်နေပါသလား" အဲဒီအချိန်တုန်းကထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းတစ်ခုငါ့ကိုဖို့အတော်လေးထူးဆန်းသလိုပဲငါကတစ်စက္ကန့်အတွေးပေးခြင်းမရှိဘဲဖြေကြား: "တကယ်တော့ကျွန်မအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်မဆရာမငါ့ကိုမေးသော်တစ်ချိန်ကသတိရ ။ ", သောသင်တန်း၏, ဆရာရယ်မောဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုအခါမူကားငါအမှန်တကယ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်မပေးကြောင်းယုံကြည်သည်။ သငျသညျသဘာဝမွေးဖွားအနုပညာရှင်, သို့မဟုတ်မဖြစ်စေများမှာ - - သင်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာမှမဟုတ်ဒီအရာတစ်ခုခုကိုညျလူသားတို့နှင့်အတူမွေးဖွားလာကြသည်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်ဇွဲဆက်ဆက်တဦးတည်းတဦးတည်းရှိတယ်အဘယ်အရာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချက်များဖြစ်ကြသည်။
ယခုသင်သည်ထူထောင်ပန်းချီဆရာတွေဟာ, သင် Fine Arts အမျိုးသားအကယ်ဒမီကနေပါရဂူဘွဲ့ရှိသည်။ ဒါဟာခက်ခဲတဲ့လမ်းခဲ့သလား ငါရည်ရွယ်ချက်အပေါ်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပန်းချီဆရာဖြစ်လိုဘူး။ ပန်းချီငါ့ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်ထက်လူနေမှုမဟုတ်ဘဲလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တစ်ကံကောင်းလူတစ်ဦးကိုစဉ်းစားအဘယ်ကြောင့်ငါပြုမည်လိုဘယ်အရာကိုကျင့်သောကြောင့်အကြောင်း, နေ့တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါလူတိုင်းငါအကောင်းဆုံးကြိုက်တယ်ဘာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကျွန်မကိုအားပေးတယ်တဲ့အံ့သြဖွယ်မိသားစုထဲမှာကြီးပြင်းဖို့ကံကောင်းပါပြီ, သူတို့နေဆဲလုပ်ပါ။ ငါကျေးဇူးတင်တယ်အရာအဘို့အကြှနျုပျကိုလှည့်ပတ်လူများ, စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ငါ့ကိုထောက်ခံပါတယ်။ သို့ပြန်သွားရန်ငါ Fine Arts အမျိုးသားအကယ်ဒမီလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာထိုအချိန်က, ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကြှနျုပျကိုဖျောင်းဖျသောငါ၏ဆွေမျိုးများဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်လိုစာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့သွားဘဲ, ငါကိုအဓိက "နံရံဆေးရေးပန်းချီ" အတွက်စာလိပ်၌ပထမဦးဆုံးဝန်ခံခဲ့သည်။ ငါ့ထံသို့ဆွဲအမြဲတမ်းပျော်မွေ့ခဲ့ပေမယ့်နှင့်အညီ, အဲဒါကိုခက်ခဲအလုပ်နှင့်အတှကျအိပျည၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု, နာရီနှင့်အချိန်နာရီတွေအများကြီးယူကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ ဒါဟာမကြာခဏစီမံကိန်းပြီးစီးဖို့တစ်နေ့လျှင်အလုပ်၏နာရီ 16 မှ 17 ငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။
သငျသညျအနုပညာအတွက်အောက်ပါဖြစ်ကြောင်းဆိုနှင့်လမ်းကြောင်းသစ်သို့မဟုတ်စတိုင်ရှိပါသလား, သင်၏အလုပ်များအတွက်လှုံ့ဆော်မှုကဘာလဲ? တကယ်ကသူတို့ကိုရွှေ့သောအရာတို့ကိုသူသညျအနှံ့ရဖို့လိုလားမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့ - ငါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်သူ၏အကြံအစည်များနှင့်အတွေးအခေါ်များထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့, အနုပညာအတွက်သူ့ကိုယ်သူဖြစ်သင့်စဉ်းစားပါ။ ငါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုမယုံကြည်ကြပါလျှင်အနုပညာရှင်တွေအနုပညာအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်ထင်ကြပါဘူး။ ငါ့အဘို့, လူ့ငါ၏အကြီးမြတ်ဆုံးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါသည် - ၎င်း၏မရေမတွက်နိုင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များနှင့်အတူလူ့ကိန်းဂဏန်းနဲ့လူ့မျက်နှာ။ ဒါဟာကျွန်မရဲ့စိတ်ကူးများကိုဖော်ပြရန်နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့အသုံးပြုတဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ငါနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကပြောင်းရွေ့နေပါတယ် အဟောင်းကိုဘူဂေးရီးယားဒဏ္ဍာရီနှင့်ဒဏ္ဍာရီ သူတို့မကြာခဏငါ၏အမှုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်များမှာအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ရှင်းပြသည်ရာနှင့်သူတို့၏နိစ္စထာဝရနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ။
သင့်ရဲ့အလုပ်ဝိညာဉ်ရေးရာကမ္ဘာကြီးထင်ဟပ်နေသည်နှင့်သင့်ပန်းချီမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များသို့မဟုတ်သင်္ကေတဆံ့။ ဤသူသည်သင်တို့သင်၏အကျင့်ကိုဖန်တီးခြင်းအတွက်အသုံးပြုနည်းလမ်းရှိပါသလား? ငါကအနုပညာမဆိုအလုပ်အနုပညာရှင်သူတို့ထဲကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအထဲတွင်အသက်ဝိညာဉ်အတွက်တည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်တစ်လမ်းအတွက်လုပ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကအနုပညာအလုပ်များ၏လုပ်လိမ့်မယ်။ ဤသူသည်ငါအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်မကြာခဏလူတို့သည်လည်းငါ့ပန်းချီကားထဲမှာပုံရိပ်တွေအလွန်အသက်ရှင်လျက်ကြည့်သောအကြှနျုပျကိုပြောပြရန်ကြိုးစားသည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုအသကျရှငျနဲ့ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့အများကြီးအခွင့်အလမ်းများကိုခဲ့သိသျောလညျးသငျနေဖို့ဘူလ်ဂေးရီးယားရွေးကောက်တော်မူပြီ။ သင်သည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနောင်တသလား? စစ်မှန်သော, ငါသည်တိုင်းပြည်ထားခဲ့ဖို့အကြိမ်ကြိမ်အခွင့်အလမ်းများကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ကျောကျွန်မပထမနှစ်တွင်ကျောင်းသားစဉ်အခါ, တစ်ဦးအမေရိကန်ပါမောက္ခ Los Angeles မှာဒဏ်ငွေဝိဇ္ဇာတက္ကသိုလ်မှငါ့ကိုမဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ထိုအခါငါ Los Angeles မှာထက်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အကယ်ဒမီအတွက်ပန်းချီကားထဲမှာအနုပညာနှင့်နည်းစနစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်မယုံကြည်ခဲ့, ငါလက်ျာဘက်သက်သေပြခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ငါနှင့်ငါ့ခင်ပွန်းဗီယင်နာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်အတွက်ကျနော်တို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဤအကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုကမ်းလှမ်းမှုခဲ့ကြသည်သော်လည်းကျွန်တော်တို့သည်ဘူလ်ဂေးရီးယားမှထွက်ခွာရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ငါခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာအိမျကနေကမ္ဘာကြီးကိုများအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ဿုံဖြစ်နိုင်သောကြောင်းယုံကြည်မိပါတယ်။
သင်သည်အမြဲတစေ clients များ "အမှုကိုနှင့်ပြပွဲဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကအကြောင်းပိုမိုပြောပြပေးနိုင်မလား? ငါပြင်သစ်, အင်္ဂလန်, စပိန်, တခြားနေရာကို USA နဲ့ထဲတွင်အများဆုံးမှာဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းဂျာမနီမှာရောင်းဖို့ကံကောင်းဖြစ်၏။ Las Vegas မှ, အမေရိကန်, နှင့် - အကြာတွင်ငါ Fine Arts ၏တောင်ပိုင်းနီဗားဒါးပြတိုက်အတွက်အနုပညာတစ်ခုကနိုင်ငံတကာပြပွဲများတွင်ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရတယ်, 2016 ၏အစအဦးတွင်ငါလီလီ Clifford ပြခန်းတွင်အင်္ဂလန်မှာပြသ: ငါ့နောက်ဆုံးထွက်ပါဝင်သူပြည်ပမှာအများအပြားနိုင်ငံများတွင်ဖြစ်ဖြစ်ပျက် ထို့နောက်ငါအနုပညာလက်ရှိမာစတာ၏အမေရိကန်စာအုပ်ထဲတွင်လူကြိုက်များအတွက်ထုတ်ဝေဘို့ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ အဆိုပါပြတိုက်အလွန်ငါ၏အပန်းချီ rated နှင့်များစွာသောလူသိများတဲ့ပန်းချီဆရာများပါရှိသည်ရာသည်၎င်း၏အမြဲတမ်း Exposition ထိုသို့ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိပါကြောင်း။ ဒါဟာထွက်လှည့် ငါယခုအချိန်တွင်အဘို့ဤ Exposition များစုဆောင်းခြင်းအတွက်နေရာတစ်နေရာတွေ့ပြီဖို့သာဘူဂေးရီးယားအနုပညာရှင်ဖြစ်၏။ Arte Milano, အနုပညာအဘို့အအီတလီနိုင်ငံ -an အနုပညာဖြစ်ရပ်ကို - ဧပြီလနှစ်ခုခုနှစ်တွင်အီတလီအနုပညာဝေဖန်ရေးသမားတွေ Internationale Tiepolo အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူငါ့ကိုပူဇော်ကြ၏။ ကျွန်မအနုပညာအတွက်အောင်မြင်မှုအတွက်ချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပရိုဖိုင်းကိုမဂ္ဂဇင်းထဲမှာအနည်းငယ်မြေားကိုနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ ဇွန်လ၌ငါ Verona တရားမျှတသော 2016, အီတလီရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်နှင့်ငါ့အလုပ်အဆိုပါ 21th ရာစုအနုပညာစာအုပ်တွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ အောက်တိုဘာလ၌ငါမရွေးခဲ့ပါတယ်နှင့်အနုပညာ Louver ကုန်စည်ပြပွဲ 2016 ပါဝင်ခဲ့ - ပဲရစ်, ပြင်သစ်။ ကြှနျတေျာ့ခံစားစေရန်, ငါ၏အမှုချီးကျူးထောပနာနှင့်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။
ယခုငါတစ်ခုတည်းပြပွဲများအတွက်အမေရိကန်နှင့်ဗီယင်နာရှိအခြို့ပြခန်း, အိန္ဒိယအပါအဝင်များစွာသောနိုင်ငံအတွင်းရှိသစ်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ, အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူအများအပြားပိုပြီးဖိတ်စာရှိသည်။ ငါကလူတစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အထဲကတွေ့နှင့်သူတို့၏နှလုံးအောက်ပါအတိုင်းသောအခါ, အခက်အခဲများရှိနေသော်လည်းတနေ့သူကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်ဆုလာဘ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ယင်းအောင်မြင်မှုကြောင့်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးလျှင်ပင်သူတို့အကောင်းဆုံးကြိုက်တယ်အမှုကိုပြုသောအခါ, ကအနည်းဆုံးသူတို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘဝခဲ့ကြပေသည်။ "သင်၏နှလုံး Follow နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်လိမ့်မည်" သင်တန်းနည်းမနောတဲ့သဘောမျိုး, -with: ငါတဦးတည်းအတွက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်သည့်နှစ်ခုစကားအလွန် ချစ်. ဖြစ်၏။
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်များနှင့်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားအနုပညာလက်ရာများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းကသူတို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာရှိသနည်း အမှန်စင်စစ်ငါကြီးမားတဲ့အစုစုရှိသည်။ ငါ icon များ, ပန်းချီကားများ, ပန်းချီ, စာအုပ်တွေနဲ့မဂ္ဂဇင်းများအတွက်သရုပ်ဖော်ပုံများဆေးထိုးခြင်း။ ငါအတူတကွသည်အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်အတူ, Mosaic နဲ့စွန်းမျက်မှန်အပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ငါ၏အစိတ်အပိုင်း post ငါ၏အက်ဘ်ဆိုက်အပျေါမှာငါ့အကျင့်ကိုကျင့်။.
အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ LinkedIn တို့အပေါ်မာရီယာ-မာဂရီးဃ Ivanova-Getova
အတတ်ပညာ, အနုပညာ Louvre ကုန်စည်ပြပွဲ, ဘူဂေးရီးယားအနုပညာရှင်, မာရီယာ-မာဂရီးဃ Ivanova-Getova, ဒဏ်ငွေဝိဇ္ဇာပြတိုက်, ပန်းချီကား | 02-02-2017 | rating:5/ 30